Vivo X23 ga - akụ ụlọ ahịa na agba atọ dị iche iche | Gam akporosis
A ga-ebido Vivo X23 na agba atọ dị iche iche
Edere Ferreno | | Mobiles, Noticias
N'ime ụbọchị ole na ole, Na Septemba 6, a ga-enye Vivo X23 ọkwa n'ihu ọha. Ọ bụ ekwentị ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta China, nke na-emezigharị ọtụtụ usoro ya maka ọdịda a. N'ime izu ndị a anyị enwetala nkọwa zuru ezu banyere ngwaọrụ a. Ugbu a, anyị nwere ozi ọhụrụ, nke gosikwara na a ga-ebupụta ya na agba atọ.
Vivo X23 apụtaworị oge ole na ole na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ. Site na nke a anyị enweela ike ịmụtakwu ozi gbasara ekwentị. N'okwu a, ụdị a ga-ewepụta na ụlọ ahịa.
Dị ka anyị kwuru, a na-atụ anya na ụdị atọ dị iche iche nke ngwaọrụ a. Versionsdị nsụgharị ahụ ga-akụ ụlọ ahịa n'okpuru aha ụfọdụ na-adọrọ mmasị. Ha ga-abụ ihe ndị a: Phantom Purple, Ime Anwansi na Red Red. Ndị a ga - abụ nhọrọ ndị ahịa ga - ahọrọ.
Versiondị mbụ nke Vivo X23 a bụ ihe atụ na-acha odo odo, nwere mmetụta gradient, sitere na pọpụlụ na-acha odo odo na fuchsia. Nke abụọ nke nsụgharị bụ ụda na-acha anụnụ anụnụ, nke gbara ọchịchịrị, ebe nke atọ na-ahọrọ agba agba uhie, nke kachasị mma ma dị egwu. Atọ dị iche iche dị iche iche na ibe ya.
Varidị atọ a dị na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Yabụ, O yiri ka ọ gaghị enwe agba ndị ọzọ maka Vivo X23 a. Chinesedị ndị China ahọrọla agba ndị ọzọ mara mma, na-ezere ndo dị ka isi awọ ma ọ bụ oji, nke na-adịkarịkarị na ekwentị.
Na Vivo X23 a, ụlọ ọrụ ahụ nwere olileanya ịmalite inweta ọnụnọ mba ụwa. Ngwaọrụ ahụ pụtara maka imepụta ya na ọkwa dị ka mmiri mmiri, nke anyị na-ahụ nke ukwuu na ahịa na izu ndị na-adịbeghị anya. Kedu ihe ị chere gbasara ụdị agba ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A ga-ebido Vivo X23 na agba atọ dị iche iche
Ozi na ụdị dị iche iche nke Sony Xperia XZ3 na-agbapụta tupu ya amalite
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nlele ga-emelite na ụdị ọhụrụ nke Wear OS